Ụlọ ọrụ na-agbakwunye igwe ahaziri ahazi, onye na-ebunye igwe na-agbakwunye - igwe LST
Sistemụ Nri Chocolate
Ngwakọta ihe ọkụkụ
Igwe na-akpụzi Chocolate
Igwe mkpuchi Chocolate
Igwe na-agbaze Chocolate
Igwe mgbakwunye ahaziri ahazi
Igwe na-efesa Chocolate Sugar na-achọ mma
Chocolate jụrụ oyi
Chocolate Pump na ọkpọkọ
Igwe nkwakọ ngwaahịa chocolate
Rental Line dum na Netherlands
Anyị nwere ike ịnye nkwado ọkachamara site na igwe ruo na ịme chocolate
Anyị na-enye OEM ọrụ na ndụ-oge-ahịa ọrụ n'ụwa nile
Akụkụ a nke igwe gụnyere igwe nri bisikiiti akpaka, igwe na-enye nri na-akpaghị aka, na ụdị igwe ndị ọzọ metụtara chocolate.it nwere ike ijikọ ya na ụdị chọkọletị ndị ọzọ n'efu, dị ka igwe depostiting chocolate, igwe enrober wdg.
Gịnị bụ igwe na-enye nri bisikiiti akpaka?
Igwe nri bisikiiti bụ akụkụ dị mkpa nke ahịrị nkwụnye chọkọletị, enwere ike iji ya na ahịrị enrober. dị ka bisikiiti chọkọletị ero, ọ na-eji ahịrị nkwụnye ego na-akpaghị aka tinye igwe nri nri bisikiiti aka, njikwa ihuenyo mmetụ, mgbanwe parameter dị mma, kwadebere ya. akpaka ọrụ, ntuziaka ọrụ, ihicha na ndị ọzọ nhọrọ mode, mfe ọrụ, mma mmezi.
Gịnị bụ igwe bisikiiti chọkọletị akpaghị aka?
Bisikiiti chocolate ero bụ ụdị ngwaahịa chocolate ọhụrụ. Ọ dị ka ero, ọ na-ejikọta ya na chocolate na bisikiiti, igwe na-emepụta ihe n'ahịrị dum na-agbakwunye igwe nri bisikiiti akpaaka. Emechara site na ntọala paramita akpaka, na-echekwa ike mmadụ na imeziwanye nrụpụta mmepụta
Kedu ka usoro igwe bisikiiti ero chọkọletị akpaghị aka si arụ ọrụ?
Ọ dị ka ahịrị nkwụnye ego chọkọletị na-akpaghị aka, agbakwunyere naanị nzọụkwụ na nri bisiki na-akpaghị aka.
1.Baking ebu kpo oku stage.The mmiri ebu adopts abụọ-layer igwe anaghị agba nchara okpomọkụ mkpuchi mkpuchi, na kpo oku cover na-ebuli na lowered site cylinder.
2.Chocolate agbapụtara stage.The servo moto draịva synchronously, na isi slide ụgbọ okporo ígwè na-akpali na balance.The isi ahụ nke igwe isi adopts na ụgbọelu 704 nlereanya aluminum alloy isi valvụ ahụ, na chocolate hopper adopts 304 igwe anaghị agba nchara interlayer cylinder ahụ, na isi ahụ nke isi igwe na ihe ihe onwunwe chọkọletị na-anakọta mmiri ọkụ na-ekesa ka ọ na-ekpo ọkụ.
3.Automatic nri nri bisikiiti.Tinye bisikiiti n'ime usoro nri, a ga-etinye bisikiiti ahụ ozugbo n'ime ụdị chocolate.
4.Conveyor system. Iji eriri 1.0 PU, mekọrịta ya na nnyefe ebu.
5.Chocolate mgbasa obi jụrụ stage.Adopt 301 niile igwe anaghị agba nchara ihe, okpomọkụ 0-10 ℃
6.Demoulding system.The top spring of SMC cylinder na-ebuli elu, hama rọba na-akụ ihe ọkpụkpụ ahụ ka ọ hapụ ya.
Lelee vidiyo anyị na usoro ọrụ igwe nkwakọ ngwaahịa.
Bọtịnụ ibe chocolate na-atụba ihe nkwụnye ego
Ngwakọta ihe akụrụngwa
Igwe mmiri mmiri chocolate
Kehoraizin-Ụdị Ball Mill chocolate grinder
Igwe na-agbagharị Chocolate Hollow
Igwe na-akpụzi Chocolate akpaaka
Chocolate igwe conche
Ihe nkwụnye ego 1D dị mfe, ihe nkwụnye ego otu égbè 2D, ihe nkwụnye ihe ịchọ mma 3D
Igwe ọkụ Chocolate 25L
Igwe eji achọ chocolate
Ihe nkwụnye ego akwụkwọ ntuziaka chocolate
Onye nkwụnye ego Chocolate Obere Shot